Guddiga Doorashooyinka Puntland oo warbixin siiyay Barlamanka [Daawo+Sawirro] – TPEC
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo warbixin siiyay Barlamanka [Daawo+Sawirro]
GAROWE, Puntland- Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ayaa maanta hortagay golaha wakiillada dowladda Puntland iyagoo u gudbiyay warbixin ku saabsan waxqabadkii guddiga mudadii ay joogeen.
Guddoomiyaha Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland Cabdiraxmaan Diiriye Samatar, ku-xigeenkiisa Maxamuud Soofe Xasan iyo xubnaha Guddiga ayaa hortagay Xildhibaanada oo ku guda jira Kalfadhigoodii 41aad ee Dastuuriga ah.
Warbixinta Guddiga oo uu akhriyay Xoghaye Liibaan Saalax Maxamud, wuxuu ku sheegay in mudadii uu guddigu jiray ay qabteen waxyaabo la taaban karo oo ay ugu horayso wacyigalinta bulshada, wax kabadalka xeerarkii ay horay u sameeyeen guddigii hore, shirar ay la yeesheen beesha caalamka iyo heshiisyo ay la galeen hay’ado iyo uurka bulshada rayidka ah, kuwaasoo ay ka wada shaqaynayeen sidii loo hormarin lada nidaamka Dimuqraadiyadda.
Warbixinta kadib Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Puntland, Cabdiraxmaan Diiriye Samatar, ayaa ka warbixiyay safar uu ku tagay Waqooyiga Amerika gaar ahaan Maraykanka, wuxuuna sheegay in socdaalkaas ugu soo qabsoomay waxyaabo muhiim ah.
Guddoomiye Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale sheegay inuu la kulmay hay’ado iyo mas’uuliyiin sar sare oo katirsan dowladda Maraykanka islamarkaana isku afgarteen sidii looga shaqayn lahaa nidaamka dimuqraadiyadda iyo hormarka Puntland.
Intaas kadib Barlamanka ayaa go’aamiyay habraaca doorashada Barlamanka imaan doona 2019 iyo in Guddigan uu sii wato shaqadiisa si loo agar doorasho qof iyo cod ah.
TPEC Media Office